Mahajanga-Fanomezana faran’ny taona: ny sekolim-bahoaka no omen-tombotsoa | Région Boeny
Nanolotra fanomezana ho an’ny sekolim-panjakana ambaratonga voalohany vitsivitsy ny orinasa SOMAPÊCHE na Société Malgache de Pêcherie ny talata 13 desambra 2016.
Teny amin’ny orinasany teny Mahajanga be no nanatanterahana izany fanolorana izany, izay natrehin’ny Préfet an’i Mahajanga, Atoa Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana, notron’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, sy ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena eto Boeny.
Araka ny fihaonana izay nifanaovan’ny Lehiben’ny Faritra sy ny Tale jeneralin’ny orinasan’ny SOMAPÊCHE ny volana lasa teo, dia nisafidy ny fampianarana ny orinasa hanaovana fanomezana faran’ny taona.
Sekoly telo teto an-tampon-tanàna araka izay no nosafidiana: dia ny EPP Antanambao Sotema, EPP Tsararano ambany sy ny EPP Tsaramandroso. Izy telo ireo no nomena, satria ny ankamaroan’ireo mpiasa tatsambo ao amin’ny SOMAPÊCHE dia saika mipetraka amin’ireo fokontany telo ireo, ka rariny loatra raha misy tamberin’andraikitra avy amin’izy ireo eny an-toerana hoy ireo tompon’andraikitra.
Isan-tsekoly ary dia samy notolorana fanamafisam-peo na micro baffle mandeha batterie iray avy, kiririoka mahataka-davitra na sonnerie à haute diffusion, tsaoka fotsy sy miloko 3 baoritra avy, solaitrabe mainty 10 avy, tafo fanitso 40 avy, ary vatomamy iray baoritra avy.
Tsiahivina fa efa tamin’ny taona 1965 no niforonan’ity orinasa ity ary anisany hahafantarana an’i Mahajanga izy.
Hiezaka hifampiraharaha amin’ireo orinasa hafa izahay mba hanaraka an’izao dian’ny SOMAPÊCHE izao, ka hanohy izany ho an’ireo sekolim-bahoaka hafa eto Mahajanga hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny.